Ahoana ny fomba hiatrehana ny fepetra coronavirus (fanidy): torohevitra azo ampiharina: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 18 Martsa 2020	• 18 Comments
Ny andro vitsivitsy lasa izay dia difotry ny fanontaniana momba ny fipoahan'ny coronavirus aho. Inona no tokony hataoko? Ahoana no fomba iatrehako ny fepetra rehetra? Inona no fiomanana hataoko amin'ny ho avy rehetra? Manana vaovao tsara aho. Ny vaovao tsara dia mazava fa mihamaro ny olona mahatakatra fa milalao hysteria faobe izy ireo. Ao amin'ny bokiko no antsoiko hoe 'ilay otrikaretina lehibe izay mitazona antsika amin'ny zava-misy diso'.
Ny zava-misy araka ny hitantsika dia tena faritan'ny fampahalalam-baovao sy ny politika. Mihamaro ny olona manomboka mahita an'io.
Mazava ho azy fa toa tsy ho vita tanteraka ny fametrahana ny fihanaky ny tsimokaretina, fa ny fandikana azy Fanatanjahantena coronavirus efa tao ary efa niseho sahady ny fipoahan'ny covid-19 tamin'ny sarintanin'izao tontolo izao tsara tarehy alohan'ny hanaovana fitsapana ofisialy eny an-tsena. Toa tsy ho vita amin'ny fahafatesana sandoka na aretina mitatra izany. Sa azo atao? Ary raha eny, nahoana ny afobe no hanao an'izany?
Ka aleo alika hoe tena misy ny virus. Izahay dia tsy mbola azontsika antoka hoe avy amin'ny natoraly azy na mety namolavola tao amin'ny laboratoara ary nitsoaka tsy nahy na niely ho toy ny bio-basy. Andao hodinihintsika ny safidin'ny fitaovam-piadiana bio (natao ho an'ny fanandramana natao fotsiny). Raha nisy governemanta na vondrona mpampihorohoro no nanatanteraka izany, dia tsy ho hitanao mihitsy satria tsy azo zahana intsony. Ny hany fantatsika dia ny nitenenan'i Bill Gates tamin'ny taona 2017 fa ny areti-mifindra manaraka dia mety avy amin'ny solosaina fitadiavana (jereo eto).
Mahita areti-mifindra be dia be izahay (vitsivitsy monja amin'ireo olona an-jatony maro), saingy ny fitakiana dia misy fitomboana eo ambadiky ny coronavirus ary na eo aza ny areti-mifindra amin'ny voalohany, ny herinandro dia ho herinandro vitsivitsy lasa tsy voafehy. Raha antsoina foana izany, ny fomba holandey amin'ny fipoahana voafehy izay misy ny 60% -n'ny mponina tsy maintsy ho voan'ny aretina ho an'ny tsimokaretina tsy maty dia somary hafahafa ihany. I Mark Rutte dia niantso an'izany vondrona fiarovana izany.
Ka ny fantatrao amin'ny fotoana sasany dia ny fipoahana tsy voafehy no ahafahanao manemotra ny fihanaky ny otrikaretina ary tsy mahazo ilay fivoarana? Izy ireo koa dia mampihatra io fomba io any amin'ny Fanjakana anglisy. Ireo firenena hafa dia handeha amina fanakatonana tanteraka. Toa ity fomba tsy fanamiana ity tsy ho ela dia ho antony hanombohana fomba tsy mitombona amin'ny sehatra manerantany. Efa hitantsika ny antso ho an'ny governemanta manerantany momba ny fepetra momba ny toetr'andro.
Na iza na iza namaky ny bokiko dia mety nahita fa rehefa manana politika sy media ianao ao am-paosinao dia manana tambajotra maro koa ianao mpiasan'ny marimaritra iraisana eo amin'ny fiaraha-monina (izay manome antoka anao ny fidiram-bola) dia tsara kokoa ny mamindra azy. Tamin'ny GDR teo aloha, araka ny tarehimarika ofisialy, olona 1 amin'ny 50 no nisy toa izany Inoffizielle Mitarbeiter. Tsy azontsika atao ny manapa-kevitra hoe mety hiteraka karavasy ny governemanta, amin'ny fampiasana teknika fampielezan-kevitra amin'ny fampielezana ny media sy ny olona mahazo vola fanampiny. Ny hany azontsika tsoahana dia ny filàn'ny governemanta an'io krizy io.
Rehefa tokony ho tonga. Nanoratra ela aho talohan'ny hivoahan'ny krizy ity lahatsoratra ity izay no nambarako fa ny kapitalisma no tondrozotra marani-tsaina mankany amin'ny kômonisma. Izany dia satria ny banky foibe dia nanonta ny tendrombohitra be dia be toy izany ka nanjary tsy azo antoka ny 'bubble' rehetra. Miaraka amin'ireto vola vita pirinty ireto, ny fampindramam-bola dia omena vola maro an'isa tsy misy tombony. Taorian'izay dia novidin'ny banky foibe ireo antoka miantoka ny trosa (famatorana). Nomena vola betsaka ny orinasa lehibe hividianana mpifaninana lavo sy hampiakarana ny vidiny manokana (amin'ny fividianana ny anjarany).
Ny vidin'ny fiantohana dia nijanona ho avo be, izay toa mandeha tsara amin'ny lafiny ara-toekarena. Ny tena zava-dehibe kokoa dia ny hoe mety hihalehibe ireo orinasa ireo, fa ny orinasa tsy manana tombontsoa dia nilatsaka (satria tsy nahazo vola maimaimpoana). Amin'ny famotehana ny toekarena dia afaka mividy sy manandanja ireo orinasa ireo ny governemanta ankehitriny. Ary noho izany, tsy ho ela ianao dia hahita ny tenanao amin'ny antsoinay hoe kominista.
Ny zavatra farany tianao amin'ny fitondrana kominista dia mpandraharaha mahaleo tena. Tianao raha ny vola miditra sy mandihy fotsiny ny tsirairay amin'ireo fitsipika apetraky ny fanjakana. Inona no vitan'ny fanjakana holandey (ohatra) tao anatin'ny andro vitsivitsy tato ho ato? Any an-trano daholo ny olona ary miankina tanteraka amin'ny fanohanan'ny fanjakana. Vola an'arivony tapitrisa no hita, mba hanomezan'ny vola kely ny rehetra azy. Ianao ve mihevitra ny Komonisma? Toa izany dia eo amin'ny lafy ratsin'izany fifandraisana izany. Ny hevitra kaominista dia tsara tarehy.
Azon'ny fanjakana ankehitriny ny mahatsapa ny lafiny rehetra amin'ny kôminisma ao anatin'ny herinandro vitsivitsy vokatry ny fipoahan'ny coronavirus. Mankafy ny drafitra ve izany?
Fantatro izany. Hieritreritra ianao fa ny minisitry ny Holandey malalantsika sy ny Mark Rutte mazoto foana dia tsy hiasa amin'ny drafitra mahasosotra toy izany. Dia manontany anao aho: Ahoana no fomba hiresahako ny script an'ny tompona izay miezaka ny hisian'ny fitondrana tsy refesi-mandidy toy izany? Ahoana no fomba nahitako faminaniana marina?
Fantatsika koa ny tarehy maizina misy ny kominista. Fantatsika izany avy amin'ny Firaisana Sovietika taloha, ny GDR, China ary Korea Avaratra. Fantatrao ve fa mahita ny endrika maizina tahaka izany ianao mandritra ny fipoahan'ny coronavirus ity? Hitantsika ny fanonganam-panjakana ataon'ny miaramila any amin'ireo firenena eropeana maro sy Etazonia. Apetraka ao anaty lidy feno tanteraka isika. Tsy mbola tany Holandy, satria ny Holandy sy Angletera dia tsy maintsy mampiseho fa tsy mandeha tsara ny fomba fiasan'izy ireo. Izany angamba no dikan'ny fampiharana fa ny totalika fanakatonana any Holandy sy Angletera dia ho avy ary ho mafy kokoa noho ny any Frantsa sy Espaina. Ho jerenay ny tarehy maizina amin'ny kômonisma ary amidy aminao izany fa ilaina amin'izany satria nanjary mino ny fihanaky ny virus ianao.
Milaza ny tena otrik'aretina aho ao amin'ny bokiko: 'ilay otrikaretina lehibe izay mitazona antsika amin'ny zava-misy diso. Naminany mialoha koa aho ao anatin'io boky io hoe hisy areti-mifindra hafa. Ny tena virus dia ny fanodinkodinam-bolan'ny vahoaka amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao sy ny politika.
Inona ny fepetra raisintsika amin'ny vinaviko:
Paositra miaramila sy polisy
Adidy hanaraka ny "torolalana sy torolàlana" (araho ny didy).
Ny fitadiavana serasera (ho an'ny "fiarovana" anao manokana, eo ambany fitadiavana ireo olona voan'ny aretina na ny olona tsy mitandrina).
Ny tsy fahampian'ny vola sy ny filaharana amin'ny kaontin'ny governemanta izay 'manome fanampiana'
Fandrarana ny fampiasana vola sy milina vola izay tsy manome vola intsony
Tsy maintsy terena hanao valan-javamaniry ivelany na fanagadrana ireo tsy mpino (olona tsy mihaino ny "torolàlana" na tsy manana antony tsara eny an-dalana)
Ny fisintomana olona izay avy amin'ny famakafakana angona lehibe dia mampiseho fa mety hikomy izy ireo
Fitsapana ara-pahasalamana mandefasana
Fandefasana adidy mba hanara-maso anao lavitra be
In ity lahatsoratra ity Nohazavaiko ny fampahalalana niaviany sy ny vokatr'izany fepetra izany. Mahafantatra zavatra sasany fantatsika ve avy amin'ny kôminisma tany amin'ny Firaisana Sovietika taloha, ny GDR, Korea Avaratra ary i Shina? Amin'ity indray mitoraka ity dia iray taolana ihany no miharatsy. Antsoiko izany hoe "kaominista teknolojia." Izany no atao hoe kominma izay manana ny haino aman-jery mitana andraikitra lehibe ary ny rehetra dia azo zahana amin'ireo mpizara ivon-toerana. Izany no efa fantatsika avy any Chine ary izao dia mihodina any Eropa sy Etazonia amin'ny alàlan'ny coronavirus hype.
Inona no mitranga raha tsy miara-miasa ianao? Avy eo mety hidiranao ianao ary io no hanery anao fotsiny. Ny lalàna rehetra no natao tato anatin'ny taona vitsivitsy, mba hampandehanana ity “fikarakarana” ity. Ny hetsika fikarakarana ara-pitsaboana an-tery no napetraka ny 1 Janoary 2020. Nampitandrina momba izany aho nandritra ny taona maro ary nanao fangatahana fanangonan-tsonia izay nosoniavina mihoatra ny 5000 in-droa. Tsy mahazo tombony. Eo ambanin'ny kabinetra Rutte ankehitriny dia nirifatra tsotra izao ny lalàna.
Inona no mbola azonao atao? Tsara kokoa angamba ny mamela anao handalo fotsiny anao avy eo ary miaina ao anatin'ity fitondrana kominista ara-teknolojia ireto, manantena fa ho lasa somary milamina kokoa indray ny zava-drehetra? Ary farany, tianay ny amboariny ny zava-drehetra. Ary farany dia te hanana vola fototra ihany koa isika. Tsara ihany koa raha tsy mila miasa mandritra ny herinandro ho avy.
Ny tantara dia nampianatra fa ny fitondrana totalista dia mitarika amin'ny famoretana tanteraka. Ka ny fanontaniana dia hoe na misafidy fidirana sy miondrika ve ianao mandritra ny fotoana fohy na ho hitanao ny vokatra maharitra.
Ao amin'ny bokiko dia manazava ny tena atao hoe 'master script'. Ilay 'master script' dia efa voalazan'ny fotoana ela taloha ary hivoaka ny zava-drehetra. Dia hasehoko anao ihany koa ny safidy tena tokony hataonao (torohevitra azo ampiharina). Ny safidy tena ilaina indrindra dia azo tanterahina ihany raha mahita ny lalao rehetra manomboka amin'ny A ka hatramin'ny Z. Tsy afaka mametraka izany aho ao amin'ny lahatsoratra 1, fa apetraka ao amin'ny pejy 134 izany. Vetivety ihany koa ny dikan-teny anglisy. Ento ho anao izany ary fantaro izay miandry anao. Ny bokiko dia nifarana tamin'ny vaovao tsara ary ny tendrony azo ampiharina lehibe indrindra hatramin'izay, fa ny famintinana azy amin'ny andalana iray dia ny maha-fototra. Ka dia hahita ny hany toro-hevitra azo ampiharina tsara ao amin'ny boky ianao. Azonao vakiana ao anatin'ny 1 andro io. Fohy fa mamy. Vakio eto
Miaraka amin'ny fividianana ny bokinao dia manohana ny asako ihany koa aho mba hahafahako manohy. Tiako ny miantso anao ho tonga mpikambana, satria maharitra sy tena ilaina ny fanohananao. Zava-dehibe ihany koa ny fizaranao ireo lahatsoratra, mba hahatongavantsika mahatratra ilay fotoan-tsarotra. Mety ho ampahany amin'ny vokatry ny fihanaky ity virus anti-hysterika ity ianao. Manana ny herinao amin'ny fikapohana bokotra iray ianao.
Ianaro izay tokony hatao ary inona no tokony hatao amin'ny fanakatonana coronavirus ho avy
Tandindonin-kafanam-po: Ny sainam-pirenena tsy mitsaha-mitombo amin'ny famonoana vola
Ny fifanakalozan-kevitra amin'ny haino aman-jery sosialy: fitaovana hanaiky ny fepetra raikitra amin'ny coronavirus?
Tags: toromarika, vola, communisme, vola, Coronavirus, Covid-19, aretina, Featured, geld, toromarika, kapitalisma, lockdown, fepetra, Marka, fitondram-panjakana, praktische, Rutte, fanjakana, fanohanana, support packages, te, soso-kevitra, Wat
18 Martsa 2020 ao amin'ny 14: 19
Inona no fantatr'i Willem Alexander?
Nanokatra ny fampirantiana hoe 'CONTAMINATED!' Ny alarobia maraina 15 aprily izao. ao amin'ny Rijksmuseum Boerhaave any Leiden. Ny fampirantiana dia momba ny fihanaky ny areti-mifindra toy ny areti-mifindra sy ny moka ary ny fomba ahafahan'izy ireo manelingelina ny fiainana.
18 Martsa 2020 ao amin'ny 15: 32
Ka dia toy izany ho an'ny ankizy .. régime régionalité ho an'ny kely.
Araho ny torolàlana: Befehl ist befehl!
Ny fandaharam-potoana 'Covid-19 ho an'ny mpianatra':
19 Martsa 2020 ao amin'ny 17: 14
Torohevitra 1) Fisakafoanana voalohany, avy eo mandro ary avy eo esory ny lamban'akanjo, mety ho toy ny hoe ny tanora nipoaka tanteraka sy ny ray aman-dreniny dia hanao ara-bakiteny izany.
18 Martsa 2020 ao amin'ny 19: 27
Manomboka amin'ny 19.00 ora hariva izao dia afaka mandre ny lakolosom-piangonana ianao. Mbola misy ve ny fiangonana ary mbola misokatra amin`izao fotoana izao izy ireo? Amin'ny ora? Moa ve mikendry ny hitandrina ny olona amin'ny lamaody fanajana ny fitazonana azy io? Handeha hiondrika aho, hivoaka ny varavarana ary hiresaka amin'ny vehivavy roa ary izy ireo dia manambara fa mandritra ny herinandro vitsivitsy, isan-kerinandro dia hiteno ny lakolosy noho ny tsimokaretina corona !!!
Izy ireo dia mandeha lavitra be amin'ny psyop trance hypnosis, mety hino azy ireo mihitsy izy ireo.
Ankehitriny na tsy ho an'ny "illuminati" aza. Ajanony izao hoy aho fa manao ny normal ny "illuminati".
Ny olona dia tsy marina izay mitranga.
18 Martsa 2020 ao amin'ny 19: 51
18 Martsa 2020 ao amin'ny 20: 04
Olona manara-maso ny fifanakalozan-dresaka amin'ny media sosialy ho enti-mody ho an'ny fanjakana. Avy eo dia mahazo rindrambaiko ianao hilazana zavatra ratsy momba azy ary hiaro ny fandaharam-potoan'ny firenena rehetra na aiza na aiza misy ny anarana Martin Vrijland. Mazava ho azy fa hahazo fiofanana kely ho an'izany ianao. Mety ho izany ve? Sa tsy mandeha hoatr'izany? Tsia? Izany no firaisana tsikombakomba hafahafa hafa ... yuck
18 Martsa 2020 ao amin'ny 21: 17
Andriambavy sy tompokovavy) tsara dia tsy tokony hiteny intsony ianao izao) .. raha mazava! Izany dia TSY mihetsika. Averiko ihany fa TSY AZO hetsika ity. Tsy azo atao izany, satria tsy mihetsika ny minisitra
18 Martsa 2020 ao amin'ny 21: 27
Mahaliana fa amin'ny maha-polisy azy dia tsy mila manao saron-tava ianao. Izy ireo ve dia mahatohitra ilay viriosy sa izy ireo mahalala fa tsy misy dikany ny fandrahonana virus?
18 Martsa 2020 ao amin'ny 22: 01
Vaovao momba ny NOS .. "ny tantsaha dia mila fandraràna ny vola andoavana vola" oh olona mazava be hoe iza ilay script mihodina
18 Martsa 2020 ao amin'ny 23: 50
Andraso fotsiny ny fifidianana vaovao ary hifidy ny antoko mifanohitra ha ha
Aza hadino fa tsy misy mpifanandrina hifidy tena tafiditra ao anaty rafi-pitantanana.
Ny ekipa mpanohitra dia efa nanontany ela an'i Johan Cruiyff hoe nanohy ny lalao / handeha hihihi, tsara foeballuher izy 😉 Johan 😉 dia fantany ary afaka nilaza izy hoe: "ianao irery no ahita rehefa tsapanao izany"
18 Martsa 2020 ao amin'ny 23: 53
Ny Lalao notronin'ny Cruyff lehibe, eny !!!
Meloka, ireo olona mahafinaritra ireo Rutte sy Cruyff, mpisehatra super
marloes nanoratra hoe:
19 Martsa 2020 ao amin'ny 20: 30
Ahoana no ahafahanay mampahafantatra anao? Betsaka ny ondry eto amin'izao tontolo izao….
19 Martsa 2020 ao amin'ny 00: 25
Fotoana handehanana hahita azy:
19 Martsa 2020 ao amin'ny 00: 30
Ny polisy dia miomana amin'ny sehatry ny fisafidianana feno fa voafidy any Holandy, toe-javatra iray mihidy ny fiaraha-monina manontolo ary voatery mijanona ao an-trano ny olona. Ao anatin'izany toe-javatra izany dia tokony hampihatra ny lalàna maika toy izany ny polisy ary, raha ilaina dia "asehoy ny sandry matanjaka."
19 Martsa 2020 ao amin'ny 08: 34
Raha azoko tsara dia olona 58 no maty, ny ankamaroan'izy ireo dia efa antitra ary efa marary. Ary noho io isa ambany dia ambany io, matahotra ny fiaraha-monina ary manaitaitra azy.
Nifoha ny olona. Mihevitra ny mpiasam-panjakana alohan'ny hanarahana ny baikon'ny lehibeny. Mametraha fanontaniana ary manakiana momba ilay lehibeny amin'ny mpiara-miasa aminao.
19 Martsa 2020 ao amin'ny 17: 19
Ary azonao atao ny manantena fa hitranga izany, satria afaka miandry ny fahatahorana ianao raha toa ka misy tranga vaovao 2000 ao anatin'ny iray andro. Avy eo dia mihamaina amin'ny vahoaka ny fampitahorana amin'ny haino aman-jery sns izay sosotra rehetra. Ary avy eo ny fanakatonana any Holandy dia ampidirina im-10 ny henjana satria efa ao Espaina sy Frantsa izao. Avy eo, afaka mahazo toe-javatra izay iheveran'ny olona mandositra an'i Holandy mankany Korea Avaratra ihany ianao.
19 Martsa 2020 ao amin'ny 10: 51
Ikkedusik nanoratra hoe:
20 Martsa 2020 ao amin'ny 00: 46
Martin dia mahery fo ianao. Lehilahy manana fahalalana betsaka. Mampalahelo fa mbola betsaka ny ondry. Mino ny olona ny haino aman-jery. Tsy ho lany intsony ilay antsoina hoe "claws". Matahotra aho fa ho lasa zava-misy ny teoria-nao. Tsy avelantsika hitranga ve ity zazalahy ity? Ilaina ny vaksiny. Tsy mieritreritra izany aho !!!!! Eto ny bokinao. Tsy andriko ny hamaky azy io. Raiso izao ary avy eo ny fahatsapana an-tsinay avy (avy amin'io antsoina hoe corona io)
« Minisitra Bijleveld ny tafika dia vonona “toerana voaferana” sy hitandroana filaminana ao anaty krizy coronavirus, hanavao: fonosana am-polony tapitrisa
Mahatalanjona mahatsiravina ao amin'ny panantonana Coronavirus nosoratan'i Dr. Wolfgang Wodarg? »
David Icke London Real video voasivana: i Icke ve tena izy sa sandoka sa ny fahamarinana ve no mifangaro amin'ny fandrika booby?
Kaonferansa ho an'ny mpanao gazety Mark Rutte sy Hugo de Jonge: ilay fiarahamonina iray sy sasany metatra sy ny fampidirana ireo fampiharana
Martin Vrijland op David Icke London Real video voasivana: i Icke ve tena izy sa sandoka sa ny fahamarinana ve no mifangaro amin'ny fandrika booby?
guppy op David Icke London Real video voasivana: i Icke ve tena izy sa sandoka sa ny fahamarinana ve no mifangaro amin'ny fandrika booby?
Riffian op Kaonferansa ho an'ny mpanao gazety Mark Rutte sy Hugo de Jonge: ilay fiarahamonina iray sy sasany metatra sy ny fampidirana ireo fampiharana
Harry mampahafaty op David Icke London Real video voasivana: i Icke ve tena izy sa sandoka sa ny fahamarinana ve no mifangaro amin'ny fandrika booby?